गाडीको प्रदुषण जाँच्ने यन्त्र खोई ? सरकार भन्छ ल्याउँदैछौँ
Fri, Mar 22, 2019 | 12:02:47 NST
11:49 AM ( 11 months ago )
काठमाडौं, चैत २९ – काठमाडौंका सडकमा प्रदुषण मापदण्ड पुरा नगरेका गाडी गुडिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले वैशाख १ गतेदेखि मापदण्ड विपरित गुडिरहेका गाडी चलाउन नपाउने निर्णय गरे पनि साउन १ गतेसम्मका लागि निर्णयलाई स्थगित गरेपछि प्रदुषण मापदण्ड पुरा नगरेका गाडी निर्वाध चल्न पाएका हुन् ।
मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीसाधनलाई बैशाख १ गतेदेखि नै नियन्त्रणमा लिनेगरी अभियान चलाउने भनिए पनि अहिले यो अवधि आउँदो साउन १ गतेबाट मात्र लागू गर्नेगरी समय बढाएको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड लागू गराउन सरकार उदासिन देखिँदा समस्या बढ्दै गएको वातावरणविदले जनाएका छन् ।
अत्यधिक प्रदुषण गर्ने, मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने, यात्रुको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरेकाले पुराना तथा प्रदुषण मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका गाडी विस्थापन गर्न लागिएको हो । सवारीसाधनबाट निस्कने विषाक्त धुवाँ वायु प्रदुषणको प्रमुख कारण हो ।
किन सर्यो समय ?
२० वर्ष पुराना गाडीलाई गुड्न नदिने अभियान थाले पनि प्रदुषण मापदण्ड नपुगेका गाडीलाई भने कारवाही भएको छैन । प्रदुषण मापन गर्ने मेसीन आइनसकेकाले तत्कालका लागि अभियान स्थगित गरिएको र अभियान साउन १ गतेदेखि लागू हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।
प्रदुषण मापदण्डभित्र नपरेका गाडीलाई काठमाडौँ उपत्यकासहित सबै महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन गर्न नदिइने विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रदुषण परीक्षण गर्ने मेशीन आपुर्ति प्रकृयामा केही ढिलाई भएकाले मेसिन नआउन्जेलसम्म अभियान स्थगित भएको हो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मेसिन आउने वित्तिकै अभियानले तिब्रता पाउँछ ।’
अभियान सुरु हुनु केहीदिन अघि मात्रै प्रदुषण जाँच्ने मेसिन नै नभएको भन्दै अभियान स्थगित गर्नुले विभागले हचुवाको भरमा सूचना जारी गरेको पुष्टि भएको छ ।अहिले सरकारसँग प्रदुषण जाँच्ने दुईवटा मात्रै मेसिन छन् ।
अब असारभित्रमा अरु उपकरण ल्याएर काम थाल्ने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘अब एकैपटक ४० वटा प्रदुषण जाँच्ने मेसिन आउँछन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामी देशभरकै यातायात कार्यालय र सेवा केन्द्रहरुमा सवारीको प्रदुषण जाँच्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’
सडकको दूरावस्थाका कारण उडेको धुलोलाई प्रमुख कारण भनिएपनि काठमाडौ उपत्यकामा वर्षायाममा पनि वायु प्रदुषणको दर उच्च पाइने गरेको छ । त्यसैले सवारीसाधनले फाल्ने अत्याधिक प्रदुषित धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिमयुक्त पाइएकाले नियन्त्रण आवश्यक छ ।
यसअघि पनि भएको थियो अनुगमन
तत्कालिन वातावरण मन्त्रालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारी सम्मिलित टोलीले यसअघि पनि समय÷समयमा सडकमै पुगेर सवारीसाधनको प्रदुषण जाँच गरेको थियो ।
गएको कात्तिकमा टोलीले मेसिनसहित सडकमै पुगेर सवारीसाधनको जाँच गरेको थियो । अभियानका बेला टोलीले काठमाडौंमा प्रदुषण बढ्नुको प्रमुख कारण दुषित धुवाँ फाल्ने सवारीसाधन रहेको दावी गरेको थियो । आकस्मिक जाँच गरिएका धेरैजसो सवारी प्रदुषण मापदण्डमा फेल भएका भेटिएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले प्रदुषण जाँच गरेर पास भएको बताउँदै हरियो स्टिकर दिएका गाडीको पनि मापदण्ड नपुग्ने गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो । प्रदुषण जाँचमा फेल भएका गाडीलाई जरिवाना थोरै राखिएकाले सवारी सञ्चालकले मापदण्ड पुरा गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।
‘त्यसैको फलस्वरुप अहिले सडकमा प्रदुषित धुवाँ फाल्ने गाडीको बोलवाला छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायातमा बढी समस्या देखिएको छ । थुप्रै सरकारी गाडी पनि मापदण्ड पूरा गर्न असफल छन् । निजी गाडीपनि यो मामिलामा कम दोषी नभएको महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाई छ ।
के छ व्यवस्था
सरकारले प्रदुषण जाँचमा कडाई नगर्दा यातायात व्यवसायी लगायत गाडीधनीले गाडी बेलैमा मर्मत नगर्ने र हेलचेक्र्याइँ गर्ने गरेका छन् । विभागलेपनि सवारीको प्रदुषण जाँचमा हेलचेक्र्याइँ गरेपछि उनीहरुलाई झनै सजिलो भएको हो ।
निजी गाडीले एक वर्ष र सार्वजनिक गाडीले ६÷६ महिनामा प्रदुषण जाँच गरेर विभागबाट हरियो स्टिकर लिनुपर्ने भएपनि यो प्रवाधान झारा टार्ने खालको मात्र भएको गुनासो छ ।
जाँचका क्रममा प्रदूषित धुवाँ फाल्ने ठहर भएका गाडीमा पनि तत्कालै रातो स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था छैन । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदुषण गर्ने गाडीले वर्कसपसम्म मात्र गुड्न पाउँछन् । तर, त्यस्ता गाडी सडकभरि छ्याप्छ्याप्ति भेटिने गरेका छन् ।
अहिले मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रदुषण जाँच हुँदैन । मेसिन आएपछि मोटरसाइकल र स्कुटरले फाल्ने धुवाँको पनि जाँच हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वायुप्रदुषण उच्च छ । वातावरणीय प्रदुषणको अध्ययनमा विश्वका तुलनामा उपत्यकाको अवस्था अधिक विषाक्त देखिएको तथ्यांकहरु पटकपटक आउने गरेका छन् ।
सेन्टर फर इन्भाएरोमेण्टल ल एण्ड पोलिसी (येल विश्वविद्यालय) र सेन्टर फर इन्टरनेशनल अर्थ साइन्स इन्फर्मेसन नेटवर्क, कोलम्बिया युनिभर्सिटीले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमसँग मिलेर नेपालसहित १ सय ८० देशको वातावरणीय अवस्थाबारे गरेको अध्ययनले नेपाली हावाको गुणस्तर निकै खराब रहेको देखाएको छ । समग्र ‘वातावरणको स्वास्थ्य सूचकांक’ हेर्ने हो भने पनि नेपालको अवस्था राम्रो छैन ।
वातावरणीय प्रदुषण बढाउन सडक खनेर उडेको धुलोभन्दा पनि सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ मुख्य कारकको रुपमा रहेको छ ।